O Si n’Aka Ndị Mkpọrọ Nọ n’Eritria Mụta Ihe
Ha Kwesịrị Ntụkwasị Obi Mgbe A Na-akpagbu Ha
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Basque Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lari Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mashi Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tojolabal Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
O Si n’Aka Ndị Mkpọrọ Mụta Ihe
Otu nwoke si Eritria gbata ọsọ ndụ na Nọọwee n’afọ 2011. Mgbe Ndịàmà Jehova bịara na nke ya, o kwuru na ya ahụtụla Ndịàmà Jehova n’obodo ya. O kwuru na mgbe ya nọ n’amị, ya hụrụ na Ndịàmà Jehova a tụrụ mkpọrọ n’ihi ihe ha kweere ekweghị aba amị, n’agbanyeghị ahụhụ niile a tara ha.
Mana, egwu dagharịrị, a tụọ nwoke a mkpọrọ. Mgbe ọ nọ n’ụlọ mkpọrọ, ọ hụrụ Ndịàmà Jehova atọ aha ha bụ Paulos Eyasu, Negede Teklemariam, na Isaac Mogos, bụ́ ndị a tụrụ mkpọrọ kemgbe afọ 1994 n’ihi ihe ha kweere.
Mgbe nwoke a nọ n’ụlọ mkpọrọ, o ji anya ya hụ na Ndịàmà Jehova na-eme ihe ha na-akụzi. Ọ chọpụtara na ha na-eme ihe n’eziokwu, na-enyetụkwa ndị mkpọrọ ndị ọzọ nri ha. Ọ hụkwara otú ndị mkpọrọ ibe ya bụ́ Ndịàmà Jehova si amụkọ Baịbụl ọnụ kwa ụbọchị ma na-akpọ ndị ọzọ ka ha soro ha. Mgbe a gwara ha na a ga-atọhapụ ha ma ha bịanye aka n’akwụkwọ iji gosi na ha agaghịzi abụ Ndịàmà Jehova, ha jụrụ.
Ihe a apụghị nwoke a apụ n’obi. Mgbe ọ kwafetara Nọọwee, ọ chọrọ ịma ihe mere Ndịàmà Jehova ji nwee okwukwe siri ezigbo ike otú a. N’ihi ya, mgbe Ndịàmà Jehova bịara na nke ya, ọ malitere iso ha na-amụ Baịbụl ozugbo, malitekwa ịga ọmụmụ ihe.
Na Septemba 2018, e mere ya baptizim ya aghọọ Onyeàmà Jehova. Ugbu a, ọ na-eji ohere ọ bụla o nwere agakwuru ndị si Eritria na Sudan, na-agba ha ume ka ha na-amụ Baịbụl ma na-eme ka okwukwe ha sie ike.
Ebe Ndị A Tụrụ Ndịàmà Jehova Mkpọrọ n’Ihi Ihe Ha Kweere
Ebe ndị a tụrụ Ndịàmà Jehova mkpọrọ n’ihi na ha na-ekpe okpukpe ha, na-emekwa ihe ndị ha nweere onwe ha ime, ọtụtụ n’ime ha nọ n’ọnọdụ jọgburu onwe ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ O Si n’Aka Ndị Mkpọrọ Mụta Ihe
ijwex isiokwu 7